December 2019 – " कञ्चनजंगा News "
देउवासँगमात्रै वार्ता, पदाधिकारी बैठकमा सहभागी नहुने : पौडेल समूह
No Comments on देउवासँगमात्रै वार्ता, पदाधिकारी बैठकमा सहभागी नहुने : पौडेल समूह
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले सभापति शेरबहादुर देउवासँगमात्रै वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा मंगलबार बसेको पौडेल समूहको बैठकले पार्टीमा चुलिएको पछिल्लो विवाद समाधानका लागि सभापति देउवासँगमात्रै वार्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि सभापति देउवाले आइतबार आफूनिकट नेताहरुसँगको छलफलमा विभाग, नेविसंघ र तरुण दल गठन तथा विस्तारका लागि सहमति जुटाउने जिम्मा उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई सुम्पेका थिए ।
पौडेल समूहको बैठकले उपसभापति निधिसँग संवाद गरे पनि वार्ता भने सभापति देउवासँगमात्रै गर्ने निर्णय गरेको युवा नेता कल्याण गुरुङले बताए । “संवाद सबैसँग गर्छौं । वार्ता सभापतिसँगमात्रै हुन्छ । बैठकले गरेको निर्णय यही हो,” उनले भने ।
बैठकले पुस २१ गते जिल्ला सभापतिहरुको भेला बोलाउने पनि निर्णय गरेको छ । “२१ गते जिल्ला सभापतिहरुसँग परामर्श गर्ने निर्णय भएको छ,” नेता गुरुङले भने, “त्यसपछि नेविसंघ, नेपाल महिला संघलगायतका भ्रातृ संगठनहरुसँगको परामर्श प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौं ।”
उनका अनुसार बैठकले जिल्ला स्तरीय नेता–कार्यकर्ता, सांसद, पूर्वसांसद, केन्द्रीय सदस्य, पूर्वकेन्द्रीय सदस्यलगायतका पार्टीका सबै तह र तप्काका नेता–कार्यकर्ताहरुसँग परामर्श गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
बैठकले बुधबार सभापति देउवाले बोलाएको पदाधिकारी बैठकमा सहभातिा नजनाउने पनि निर्णय गरेको छ । सभापति देउवाले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि उमेदवारको टुंगो लगाउन आप्mनो निवास बूढानीलकण्ठमा पदाधिकारी बैठक बोलाएका छन्
उदयपुरमा ऐलानी जग्गा नाप्ने कार्य शुरु
No Comments on उदयपुरमा ऐलानी जग्गा नाप्ने कार्य शुरु
उदयपुर : उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले आधुनिक मेसिनबाट ऐलानी जग्गाको नाप जाँच विवरण संकलन कार्यको सुरुवात गरेको छ। नगरपालिकाले मंगलबारदेखि औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी वडा नं. ६ देखि सो कार्यको थालनी गरेको हो।
नापचाँच गरी विवरण संकलनपछि उपभोग गर्नेलाई सो जग्गाको स्वमित्व दिने प्रक्रिया थाल्ने जनाएको छ। नगरवासीको प्रमुख समस्या, आवश्यकता र चाहना अनुरुप यस्तो कार्य थालनी गरिएको प्रमुख बलदेव चौधरीले बताए। नगर प्रमुख चौधरीका अनुसार वडा नं. ६ देखि थालिएको कार्यलाई १६ वटै वडामा विस्तार गरिने छ।
कामको प्रभावकारिता र पारदर्शिताका लागि ऐलानी जग्गाको विवरण संकलन तथा व्यवस्थापन निर्देशन समिति नै बनाइएको छ। नगरपालिका क्षेत्रमा करिब ६० प्रतिशत जग्गा ऐलानी, प्रति रहेको जनाउदै ऐलानी जग्गाको विवरण संकलनको उद्देश्यले उपभोगका आधारमा फारम भर्न निवेदन माग यस अघि गरिएकामा करिब १९ हजारले निवेदन दिएको प्रमुख चौधरीले बताए। प्रमुख चौधरीले वडा नं. ६ र वडा नं. १ देखि नाँप जाँचको काम थाल्ने र अन्य थप दुईवटा मेसिन किनेर सबै वडामा तीन महिनाभित्रमा नापजाँच गरी ऐलानी जग्गाको विवरण निकाल्ने कार्य गरिने बताए।
उनले विवरण संकलन लगत्तै नगरबासीलाई स्वामित्व दिने काममा नगरपालिका लाग्ने, ढिलोमा डेढ वर्ष भित्रमा नागरिकलाई स्वामित्व दिने काम पूरा गर्ने जानकारी दिए। प्रमुख चौधरीले भने, ‘अझै पनि प्रदेश र संघबाट नीति, निर्देशन र अधिकार प्राप्त गर्न आवश्यक छ। हामीले दृढताका साथ नगरबासीको आवश्यकता र चाहनाअनुरुप यो काम थालेका छौं।’ विवादरहीत बनाउन र आवश्यक परे संघ र प्रदेशमा जनमत देखाउन नगरबासीको सहयोग मागेको प्रमुख चौधरीले बताए। प्रमुख चौधरीले भने, ‘नगरबासीको पूर्ण सहयोग मिल्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु।’ ऐलानी जग्गामा शदियौंदेखि जग्गाको चासभोग रहनुका साथै लाखौं खर्चेर घर बनिसकेका छन्।
तर स्वामित्वको सामान्य निस्सा प्रमाण भने नभएकाे स्थानीयको गुनासो छ। त्यस्तो ठाउँमा नगरपालिकाले बस्ती उठाउन पनि नसक्ने र राजस्व पनि उठाउन नसक्ने अवस्था यथावत छ। प्रमुखचौधरीले हाल ऐलानी जग्गाको विवरण संकलन गरी स्वामित्व दिने कामको प्रक्रिया थालिएको बताए।
सभामुखबारे ओली-प्रचण्डबीच बालुवाटारमा छलफल
No Comments on सभामुखबारे ओली-प्रचण्डबीच बालुवाटारमा छलफल
प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच बालुवाटारमा छलफल सुरू भएको छ।
पार्टीबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा उनीहरूको छलफल केन्द्रीत छ।
सभामुखको उम्मेदवार को हुने भन्नेबारे नेकपाभित्र सहमति हुन सकेको छैन। आजको भेटमा दुई अध्यक्षले सभामुखको उम्मेदवार टुंगो लगाउने अपेक्षा नेकपा नेताहरूले गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पूर्व सभामुख एवम् स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन चाहेका छन् भने पूर्वमाओवादी पक्षधरले स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउन बल गरिरहेका छन्।
उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेले पनि सभामुखका लागि आफू स्वभाविक दाबेदार रहेको बताउँदै आएकी छन्।
नेकपाभित्र सभामुखको चयनमा सहमति नहुँदा प्रतिनिधि सभाको बैठक समेत प्रभावित भएको छ।
पुस ११ गते बस्ने भनिएको संसद बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको थियो। अर्को बैठक पुस १६ गतेका लागि बोलाइएको छ।
भोलिको बैठकबाट सभामुख निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने संसद सचिवालयको तयारी छ। तर नेकपामा सहमित जुटेन भने भोलिको बैठक पनि सूचना टाँसेर स्थगित गर्नु पर्ने हुन्छ।
यसरी आरोहण गरेकी थिइन् पूर्व ‘मिस नेपाल वर्ल्ड’ खतिवडाले ‘मो ब्लाँ’(हेर्नुहोस भिडियो सहित)
No Comments on यसरी आरोहण गरेकी थिइन् पूर्व ‘मिस नेपाल वर्ल्ड’ खतिवडाले ‘मो ब्लाँ’(हेर्नुहोस भिडियो सहित)
पूर्वमिस नेपाल वर्ल्ड श्रृङ्खला खतिवडाले पश्चिम युरोपको सबैभन्दा अग्लो हिमाल ‘मो ब्लाँ’ आरोहण गरेको भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ। काठमाडौंस्थित फ्रान्सेली दूतावासले भिडियोलाई सोमबार युट्युवमा राखेको हो।
खतिवडाले यसै वर्ष साउनको पहिलो साता मो ब्लाँ आरोहण गरेकी थिइन्। खतिवडा नेपाल-फ्रान्स कूटनीतिक सम्बन्धको ७०औं वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजना गरिने विशेष कार्यक्रमहरूको लागि सद्‍भावनादूत हुन्।
मो ब्लाँको चुचुरोमा पुगेपछि खतिवडाले त्यहाँ नेपाल र फ्रान्स दुवै देशको राष्ट्रिय झण्डा फहराएकी थिइन्। उनलाई दुई नेपाली चलचित्रकर्मी सिसन बानियाँ र प्रज्वल थापा मगरले साथ दिएका थिए। ब्लाँ आरोहण गर्दा खतिवडालाई लिजेन्ड्री स्केअर एनसेलमी बाउडले गाइड गरेका थिए।
मो ब्लाँ आरोहणको सम्पूर्ण तारतम्य काठमाडौंस्थित फ्रान्सको दूतावासले मिलाएको थियो। आरोहण नेपाल-फ्रान्स कूटनीतिक सम्बन्ध ७० औं वर्ष पुगेको अवसरामा गरिएको थियो।
मो ब्लाँलाई ‘सेतो हिमाल’ को रूपमा चिनिन्छ। मो ब्लाँको उचाई ४ हजार ८ सय ८ मिटर (१५ हजार ७ सय ७४ फिट) रहेको छ। यो हिमाल फ्रान्स र इटालीको सिमानामा रहेको छ।
आजबाट देशका अधिकांस ठाउँमा चिसो बढ्ने साथै बर्षासँगै हिमपात हुने ! सचेत रहन आग्रह
No Comments on आजबाट देशका अधिकांस ठाउँमा चिसो बढ्ने साथै बर्षासँगै हिमपात हुने ! सचेत रहन आग्रह
मंगलबारदखि देशका धेरै ठाउँमा चिसो बढ्ने मौसमविद्ले बताएका छन् । अहिले जम्मू-कश्मीरमाथि रहेको पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली पूर्व सर्ने क्रममा रहेको र यो प्रणाली पूर्व सर्दै नेपालको पश्चिमी भेगमा साेमबार रातिसम्ममा प्रवेश गर्ने देखिएको मौसमविद् शान्ति कँडेलले बताउनुभयो ।
यो प्रणालीका कारण बुधबार र बिहीबार देशैभरी बदली भई तापक्रम घट्ने र देशैभरी चिसो बढ्ने अनुमान रहेको मौसमविद् कँडेलले बताउनुभयो । यस्तै, यही प्रणालीका कारण आउँदो बिहीवार र शुक्रबार केही ठाउँमा पानी पर्ने मौसमविद्ले बताएका छन् । देशभर तापक्रम घट्ने सम्भावना रहेकाले हिमपात र चिसोबाट जोगिन सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेकाे छ ।
हामी अधिकांश सरकारी स्कुल भन्नासाथ नाक खुम्च्याउँछौँ । काठमाडौँमा केही सामुदायिक विद्यालय पनि निजीकै हाराहारीमा उत्कृष्ट नतिजा दिन सफल रहेका छन्। प्रधानाध्याक, शिक्षक र अभिभावकको लगनशीलता एवं सक्रियताले केही विद्यालय अब्बल कहलिएका छन्। सख्यात्मक हिसाबले एक हजार दुई सय निजी विद्यालय रहेको काठमाडौँमा दुई सय ८५ सामुदायिक विद्यालय रहेका छन्। दुई सय ८५ मा पनि केही विद्यालयमात्र निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेगरी उत्कृष्ठ कहलिएका छन्।
रत्नराज्य मावि मध्यबानेश्वर, ज्ञानोदय मावि कलङ्की, निलवराही मावि कालिमाटी, विश्वनिकेतन मावि त्रिपुरेश्वर, गीतामाता मावि डल्लु, जनसेवा मावि, कीर्तिपुर, मङगलोदय मावि थानकोट, विजय स्मारक मावि, डिल्लीबजार, पद्मोदय मावि पुतलीसडक, तरुण मावि बालाजुलगायत विद्यालय सामुदायिकका राम्रा विद्यालयअन्र्तगत पर्दछन्।यी विद्यालयमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको उत्रीर्ण प्रतिशत ९६ देखि १०० सम्म छ।
विद्यालयमा भर्ना अभियान नै नगरी यी बिद्यालयमा पढ्नका लागि विद्यार्थीको भीड देखिएको छ। विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण भएपछि विद्यार्थीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ती विद्यालयलाई चिन्ताले सताएको छ। निजी जस्तै अङ्गेजी माध्यममा पढाउने हुने ती सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा उर्तिण गरेपछि मात्र भर्ना पाउँछन्।
प्राइभेट स्कुलसँग पनि प्रतिषपर्धा गर्दै आएका यी सामुदायिक विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीको पढाइ राम्रो हुँदैन भन्ने आम अभिभावकको सोचाइमा परिवर्तन आउन थालेको छ। सरकारी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिपर्धा गर्न सक्दैनन् भन्ने अभिभावकको मानसिकता समयसँगै विस्तारै परिवर्तन हुँदै गएको छ । संकटपूर्ण अवस्थामा पनि ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौंका केही सामुदायिक विद्यालयले उत्कृष्ट नतिजा ल्याई अब्बल देखाउन सफल भएकाले अहिले अभिभावक राम्रा सामुदायिक विद्यालय खोज्दै हिँड्न थालेका छन
आफ्नै छोरीको अप*ह*रण गरेको आरोप लागेकी आमा प्रमाणसहित आईन मिडियामा ! यस्तो अवस्थामा फेला परिन् छोरी (भिडियोमा हेर्नुहोला)
No Comments on आफ्नै छोरीको अप*ह*रण गरेको आरोप लागेकी आमा प्रमाणसहित आईन मिडियामा ! यस्तो अवस्थामा फेला परिन् छोरी (भिडियोमा हेर्नुहोला)
११ महिनाकी हुदा छोरीलाई सासु ससुरालाई छोडेर गएकी आमाले अहिले ६ वर्ष हुदा खोसेर लगेपछी ललितपुर स्थित बालकुमारीमा रुवाबासी चलेको छ । २०७१ सालमा लण्डनमा जन्मिएकी छोरीलाई राम्रो स्याहार नपुगेर काठमाडौँमा ११ महिनाको हुदा देखि आमा बुवासंग छोडेर गएको छोरीको बुवा विजय बस्नेतले बताएका छन् ।
लन्डनबाट श्रीमान श्रीमती २ बर्ष बसेर फर्केपछी घर झगडा भएर डिभोर्ससम्म पुग्यो। डिभोर्सको समयमा ३६ लाख पैसामा छोरी श्रीमानलाई छोडेर श्रीमती अष्ट्रेलिया उडेको र फेरी अहिले आएर छोरी चाहियो भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको श्रीमान विजयले बताएका छन् ।
उच्च अदालतबाट बच्चा आमासंग जान्न भन्दै रुदै कराउदै गर्दा पनि आमाको तर्फमै फैशाला गरेपछि श्रीमान र श्रीमती दुवै मिडियामा आएका छन् । अदालतको आदेश अनुसार आफुले बच्चाको हेरविचार गर्नको लागि ल्याएको र आमा भएकाले आफुले राम्रोसँग हेरचाह गर्न सक्ने बताएकी छिन् । छोरी भेट्न भनेर गएका उनका श्रीमान र अन्य सदस्यबीच ल*फडा परेको छ ।
स्कुलदेखि घरका सबै सदस्यले आमा नै गलत भएको बताउदै आएका छन् भने धेरैले आमा नै गलत भएको बताएका छन् । यस्तो भन्दै गर्दा ती सानी नानिकी आमा पनि प्रमाण सहित मिडियामा आएकी छिन् । बाकी भिडियोमा हेर्नु होला :